Dhalada Dhalada, Dhalada Dhalada, Weelka Dhalada - Glasshui Glass
Khibrad qani ah
Shirkadeena waxay qaadataa tikniyoolajiyad wax soo saar horumarsan iyo tikniyoolajiyad qoto dheer oo farsamo, waxaan heysanaa qalab iyo qalab tijaabo oo heer sare ah, si aan uheno awood horumarineed oo xoogan.
Waxaan bixinaa in kabadan 3000 oo alaab ah oo ay kujiraan dhalooyinka quraaradaha, sida dhalooyinka quraaradaha, dhalooyinka barafuunka cadarka, dhalooyinka saliida saytuunka, dhalooyinka dhaqanka dhirta ...
Shirkadda waxaa la aasaasay Febraayo 2015, waxaan leenahay 5 waaxood, oo ay ku jiraan waaxda ganacsiga shisheeye, waaxda ganacsiga gudaha, waaxda wax soo saarka, iwm.
Xuzhou Honghui waxyaabaha muraayadaha Co., Ltd. waxay soo dhaweyneysaa macaamiisha adduunka oo idil, waxaan rajeyneynaa inaan noqdo lammaanahaaga lagu kalsoon yahay!
wax soo saarkeena muuqda
Waxaan sidoo kale bixinnaa dhammaan noocyada dhalooyinka quraaradaha ee loogu talagalay farsamaynta qoto dheer, sida qaboojinta, korantada, buufinta, mashiinka iyo daabacaadda shaashadda.
500 ~ 1000ml saliid saytuun laba jibbaaran oo cagaaran madow cagaaran b ...
Xuzhou Honghui waxyaabaha galaaska Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa iskuulka Junsheng, Magaalada Xuzhou. Waa shirkad warshad iyo ganacsi isku dhafan horumarka iyo waxsoosaarka.Qormooyinka, wax soo saarka, iibka iyo ganacsiga. Waxaan xaq u leenahay dhoofinta badeecadaha. Warshadeena Waxaan xaq u leenahay dhoofinta alaabada. Our warshad ku dhowaad 30 sano oo horumar iyo waayo-aragnimo wax soo saarka…